ကျုပ် နဲ့ မန်းဂဇက် ဒီနေရာမှာ တစ်ခန်းရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျုပ် နဲ့ မန်းဂဇက် ဒီနေရာမှာ တစ်ခန်းရပ်
ကျုပ် နဲ့ မန်းဂဇက် ဒီနေရာမှာ တစ်ခန်းရပ်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Dec 21, 2012 in Creative Writing | 43 comments
ကျုပ်နဲ့ မန်းဂဇက် ဒီနေရာမှာ တစ်ခန်းရပ်
ကျုပ်ကျုပ်နဲ့ ပြောတာဟာ အညာသားမို့ ဒီလို ပြောတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နားမယဉ်သူများ ခွင့်လွတ်စေချင်ပါတယ်။
ကျုပ်တောင် ဘာလိုလိုနဲ့ ဟောဒီ ဂဇက်ဆိုတဲ့ ရွာကြီးကို အခြေချမိတာ တစ်နှစ်ခွဲ ဝန်းကျင်လောက်တောင် ရှိနေပါပြီ။ သူကြီး ဦးခိုင် (ကိုင်) ဆိုတာလည်း သိတဲ့အတိုင်း ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ နေရာမှာ နှစ်ယောက် မရှိတာကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ ဟိုအရင်က ပြောခဲ့သလို ပေါက်ဖော် (စိန်ဗိုက်)၊ မောင်ပေ တို့ရဲ့ တွဲခေါ်မှုကြောင့် တစ်ကြောင်းကြောင့် ကျုပ် ဒီလို အနေကြာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တအင်းအင်းနဲ့ ညည်းနေတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို အချိန်တိုအတွင်း ရောဂါ ပျောက်ကင်းသွားအောင် ကုသနိုင်တဲ့ သမားတော် တစ်ယောက်လို ဟောဒီ ဂဇက်ဆိုတဲ့ ရွာကြီးကလည်း တစ်ခဏတာ အတွင်းမှာပဲ ရွာထဲ အခြေချမိသွားလောက်အောင်ပဲ ဆွဲဆောင်နိုင်လှတယ် ဆိုတာကိုလည်း ပြောခဲ့ချင်ပါသေးတယ်။
ကလေးတစ်ယောက် လူကြီးတွေ စကားဝိုင်းထဲကို ရောက်သွားသလို စရောက်ခါစက မျက်စိသူငယ်၊ နားသူငယ်နဲ့ လူကြီးတွေ ပြောဆို ဆွေးနွေးနေကြတာကို နားထောင်ရင်းနဲ့ပဲ နောက်ပိုင်း ရွာသက်လေး ကြာလာတဲ့အခါမှာ ရွှတ်နောက်နောက် ပုံစံတွေနဲ့ နပန်းလုံးရင်းက အဲ့ဒီ ဝိုင်းတွေမှာလည်း ဘာရယ်မဟုတ် ဟိုပြောဒီပြော လျောက်ပြီးတော့ ပြောဖြစ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။
ခခယယ ဘယ်သူ့ကိုမှ လုပ်စရာမလိုပေမယ့် လူကြီးတွေကို လူကြီးတွေလို ရိုသေလေးစားစွာ ဆက်ဆံခဲ့တာတွေ ရှိသလို၊ အကြောင်းမသိ၊ အသက် မသိသေးခင်မှာ ကိုယ့်ထက် အသက်ဂုဏ်ဝါကြီးသူကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ပြောသလို နင်ဟယ်၊ ငါဟယ် ပြောဆို ခဲ့မိတာတွေလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် ဒါတွေကို ခွင့်လွတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်သလို၊ ဒီအတွက် ကျုပ်အနေနဲ့ တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတာလေး ….။
အရီးလတ်တို့၊ အန်တီ ပဒုမ္မာတို့၊ အန်တီ မမ တို့၊ တီချယ်နုတို့ ပြီးတော့ ဦးခိုင်၊ ဦးပါ၊ ဦးမိုက်၊ ဘဖော၊ ဆရာသစ်၊ လေးပေါက်၊ ဦးဘလက် စတဲ့ စတဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ ရင်းနှီး ခင်မင်ခွင့် ရခဲ့တာတွေ၊ ကိုပေ၊ စိန်ဗိုက်၊ ဖရဲသီး၊ ဘဲဥ၊ ကိုဖက်ကက်၊ ကိုအင်ဇာဂီ၊ ကိုမတ်၊ ကိုသူရ၊ ဦးဆာမိ၊ ဦးမာဃ၊ ကိုရွှေတိုက်၊ မအိတုံ၊ မရွှေအိ၊ အမပုခ်ျ၊ မမရွှေကြည်၊ အမခိုင်၊ မအေးမြတ်မွန် စတဲ့ စတဲ့ ခင်မင်စရာ ကောင်းတဲ့ လူများနဲ့ ရင်းနှီး ခင်မင်ခွင့် ရခဲ့တာတွေကိုလည်း အမှတ်ရနေမှာပါ။
နှုတ်ထွက်တယ်၊ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်၊ လက်ပြကာ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ် .. ဆိုတဲ့ စကားတွေကို မသုံးချင်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်မို့ .. ရှိပါစေတော့။
အမှာတော်များ ပါးခဲ့ချင်ပါသလား … ဟင့်အင်း … ခေါင်းခါပါရစေ .. ဘာလို့လဲဟင် .. ဟုတ် .. ကျုပ်က ဗရုပ်သုတ်ခမို့ …..။
မင်းမို့ ပြောရက်တယ် .. မဟုတ်ရပါကွယ် … ငါလည်း ငါ့အကြောင်း … မင်းလည်း မင်းအကြောင်း … အသစ်နဲ့ အဟောင်း … ဓမ္မတာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေမယ့် … အချိန်မတိုင်ခင် ကြွေလွင့်ခြင်း ဆိုတာလည်း .. ရှိကောင်းကြတာပဲ … ဒါပေမယ့် .. ငါကတော့ အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေမှာပါပဲ …။
မြေခဖို့ မျက်ရည်တွေ ကြွေကျလာတာ မဟုတ်ပေမယ့်၊ မျက်ရည်တွေ မြေသို့ ခတယ်ဆိုပြီး သုံးတတ်ကြပါတယ်။ “ခဏခဏ မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ လက်၊ အင်အား ချည့်နဲ့နေပြီ .. မောင် …” ဆိုပြီးတော့တောင် ကဗျာဆရာမ မိကောက် က ဖွဲ့ခဲ့ဖူးသေးရဲ့။
မြေပျောက်မှာစိုးတဲ့ မျောက်မျိုး တစ်ညည့်ကို မြေပြင်ဆီ ဆင်းသက်လို့ သုံးခါ စမ်းသလို ဟောဒီ ဂဇက်ဆိုတဲ့ ရွာကြီးထဲမှာ စာတစ်ပုဒ် ရေးတင်လိုက်တိုင်းပဲ ဘယ်သူတွေများ ဘယ်လိုမျိုး မှတ်ချက်ပြုသွားသလဲ ဆိုပြီး ရင်ခုန်စွာ ဖွင့်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေ၊ ဒီနေ့ ဘာတွေများ ထူးခြားတာတွေ တက်လာမလဲဟဲ့ ဆိုတာတွေနဲ့ပဲ တစ်နေ့တစ်နေ့နဲ့ ရက်ဆက်ပေါင်းများစွာ ရွာတစ်ခွင် လျောက်လို့ လည်ခဲ့တာတွေ၊ ပြီးတော့လည်း မိသားစုသဖွယ် ဖြစ်လာတဲ့ မြင်ဖူး၊ မမြင်ဖူး မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ ရင်းနှီးစွာ ပြောဆိုကြရင်းနဲ့ ကိုယ်တစ်ခု ပြောလိုက်လေတိုင်း ဘယ်သူကများ ငါ့ကို ဘယ်လို ပြန်ပြောသွားမလဲ ဆိုပြီး ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့ ပို့စ်ကို ခဏခဏ ရင်ခုန်စွာ ဝင်ကြည့်ခဲ့ရတာတွေ … ဒါတွေကို ပြန်တွေးမိရင် မျက်ရည် ဝိုင်းလေမလားပဲ။ ဝိုင်းနေတဲ့ မျက်ရည်တွေကြောင့် အမြင်မကြည်ဘူး ဖြစ်လာခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း ကျုပ်အပေါ် အမြင် မကြည်သူများကို တခုတ်တရနဲ့ မေတ္တာ ပို့သနေဦးမှာပါ။
သွားမယ်၊ သွားမယ်နဲ့ ဒီကောင်နှယ် အလွမ်းသယ်လိုက်၊ ဟိုပြောဒီပြော လျောက်ပြောလိုက် လုပ်နေတာ ပြီး မပြီးနိုင်တော့ဘူးလို့ သောက်မြင်ကပ်တဲ့လူတွေက အပြစ်တင်နေတော့မှာဘဲ … ။ ခင်ခင်မင်မင် ချစ်ရွှင်စွာနဲ့ ဂဇက်မှ ရွာသူားအပေါင်း ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာဖို့ အကြောင်း ကိုတော့ဖြင့် ကျုပ်က ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါရစေဦး ခင်ဗျာတို့။ ဟုတ်ဗျာ …… ဒီတစ်ချက်ထဲမှာ ချစ်သူ၊ ခင်သူ၊ မချစ်သူ၊ မခင်သူ၊ သောက်မြင်ကပ်သူ၊ မကပ်သူ အားလုံး အားလုံး ပါပါတယ် ဆိုတာလေးကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရင်းနဲ့ ကဲ … ဆရာတို့ရေ နိဂုံးအပြီးတိုင်သွားပါပြီဗျို့ ………….။
ဟယ်။ ဟဲ့!! ဒီ အံစာတုံး က ဘာဖြစ်တာတုန်း။
ဘယ်နဲ့ တစ်ခန်းရပ် သွားတာတုန်း။
schedule ဆွဲပြီး တင်တာ ထင်တယ်
ကမ္ဘာသစ်က ရွာသစ်မှာ ထပ်တွေ့မယ်ကွယ်
ဒီလို လုပ်သွားလို့ ဘယ်ရမလဲ မောင်အံဇာရယ်…
ရှင့်မှာ ရေးစရာ အကြွေးတွေ ရှိနေသေးတယ်တော့..
တောင်ပေါ်က တယောသံထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဗြဟ္မာမောင်မောင် အကြောင်းရေးဖို့ ကတိက၀တ်ပြုထားတယ်လေ.. မရှင်း မရှင်းနဲ့မို့ ခွင့်မပြုနိုင်သေးဘူးတော့…….
ကို မဟာရာဇာ အံစာတုံး ရေ
တကယ်ဘဲလား – – – – – ဟင်။
အဟုတ်ဘဲလား – – – – – ဟင်။
ဟဲ့ဟဲ့ မိန်းမသွားခိုး မလို့လား နာရောလိုက်ခဲ့မယ်အေ့
ညည်းဂ ဘာရောဂါထရဒါလဲအေ့ သများဂို တစ်ဥထဲပစ်ထားတော့မှာလားအေ့ :eee:
ဘဲဥမ … ကောင်းတယ် … အိုက်ဒါ ညည်းအတွက် ၀မ်းသာစရာမဟုတ်ဘူးလား …. ညည်းပြိုင်ဘက်လျှော့တာပေ့ါ … နှိုမှုန့်ဆို နာ့တမီးလေး တစ်ဝက်ခွဲရဦးမယ် … နာကတော့ သူများတွေ ဘယ်လိုခံစားရမယ်မသိ … ပျော်ဒယ် …. ပျော်ဒယ် ….. လုမယ့်လူမချိတော့ဘူး …..
တာတာမောင်မောင်အံရေ ….. မာမီကို မစရတော့ အကုသိုလ်လည်းနည်းသွားမှာပေ့ါ …….. ရန်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ဖွဘုတ်ကိုလာခဲ့ပါ … အချိန်မရွေး နေရာမရွေး …. စိန်ခေါ်လျှက်ပါနော် ………..
မောင်အံဇာက ပို့စ်မှာ ပါတဲ့ပုံတွေ ကို 2013 မှာ မသုံးတော့ဘဲ မူပိုင်ရုပ်ကို ဂဇတ်ရွာသူားများကို အတိအလင်းထွက်ပြတော့မှာမို့ နှုတ်ဆက်ထားတာတဲ့…
ဟဲ့ဟဲ့ အခုန နာတွေ့လိုက်တဲ့ ပုံက ဆေးလိပ်ကြီးဖွာနေဒါ
အခု ဘယ်ကောင့်လက်ချက်နဲ့ ညည်းဂပြဲသွားရတာဒုံးအေ့ (မျက်ခုံး) [O:]
ခြောက်မျက်နှာ ကိုအံစာရေ အဘယ်ကြောင့်ရှောင်ပုန်းလိုပါသလဲဗျာ…….
အံချာတုံးမ နင်ပြောတော့ စစ်ကိုင်းချောင်ကိုဘယ်တော့မှ မသွားဘူးဆို အခုတော့သွားပြီပေါ့လေ ဒေါ်ညွန့်စိန်ကြီးတော့ သနားပါတယ်ဟယ် :harr:
ဒါနဲ့ စကားမစပ် တစ်ကယ်သွားမှာလားဟင်
တခန်းရပ်ရအောင် ပြဇတ်ကနေတာမှ မဟုတ်တာနော်.. နှုတ်ဆက်စရာ မလိုပါဘူး။ သွားစရာရှိရင်သွား သတိရရင်၊ လမ်းကြုံရင် ၀င်လာခဲ့ပေါ့။
ရွာထဲက လောင်းကစားသမားတွေ ညည်းမရှိရင် ဒုက္ခရောက်ကြမှာ…..
မဟုတ်မှလွဲရော…………. Casino ကိုများ သွားမလို့လားဟင်…
အမလေး အဲလို သွားလို.ရရိုးလား ကိုကိုအံ ရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေရှင်းသွားအုံးလေ…
ဟောဒီမှာ လက်မှာဆွဲထားတာ တစ်ယောက် ခါးတွင်းခွထားတာတစ်ယောက်.. ပုခက်ထဲမှတစ်ယောက်..ဟောအခု ဗိုက်ထဲမှာတစ်ယောက်…ရှင်ဒီလို စားပြီးနားမလည်မလုပ်နဲ.လေ.. အဟင့် ………
ဘယ်နှယ့်အေ.. စွန်.ခွာထွက်ပြေးမယ် မကြံနဲ. ဟွင်းဟွင်းဟွင်း… ကျမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားမယ်.. ဘယ်နှယ့် တခန်းရပ်မလေးဘာလေးနဲ… လင်နဲ.မယား ယူတုံးကတော့ ယူထားပြီး ဘာအခုမှ တခန်းရပ်မယ်လေးဘာလေးနဲ. ကွာရှင်းစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသွားအုံး.. ပိုင်ဆိုင်မှုတ၀က်ပေး …… မပေးလို.ကတော့ ဆွဲမယ် ရှင်ကို တရားးးးးးးးးး
တကယ်ပြောနေဒါလား ကိုအံစာ မနောက်ပါနဲ. ဦးလေးရယ်….
မန်းဂဇက်ရဲ့ အခန်းဆက် ဇာတ်လမ်းရှည်ကြီးမှာ
ကမ္ဘာပျက်မယ်လို့ ပြောနေသံတွေကြားပြီး စိတ်ရှုပ်နေတာနော်….
ရွာထဲက ထွက်မယ်လေး ဘာလေးနဲ့ လူကြီးကို လာမနောက်နဲ့။
ဒေါက် ခနဲ မြည်အောင် ခေါက်ထည့်လိုက်မယ်။
မောင်အံစာက ရွာထဲကို နောက် မ၀င်တော့ပါဘူးဆိုတာ ၂၀၁၂ အတွက် ဖြစ်မယ်။ :harr:
ကို အံစာတုံး ဘယ်နှယ့် ဖြစ်ရတာတုန်းဗျ ။ မနောက်ပါနဲ့ ဗျာ။ လွမ်းလို့ ကျန်ရစ်ခဲ့မှာကို အားမနာဘူးလား။(ဘာရယ် ညာရယ် မဟုတ်ပါဘူး) ဆွဲထားလို့ ရမလားလို့ မူကြည့် တာ အဟိအဟိ။
တင်ထားတဲ့ပုံမှာ ၆ခန်းပါ တယ်။
အဲဒါကြောင့် မပူကြပါနဲ့လို့ ရေးထားသေးတယ်လေ။ :harr:
တစ်ခန်း ရပ်ပြီးရင် ၂ခန်း ရပ်လို့ ရအောင် ဆက်သွား ဆက်သွား..
၂၀၁၃ မှာ နာမည်သစ် လူသစ် စိတ်သစ် နဲ့ ဒီ အကောင့် နဲ့ ပဲပြန်ဝင်လာခဲ့နော်..
ဒီလိုဘယ်ရမလဲငါ့မောင်အံစာခြောက်မျက်နှာ အဲဒါဆို မိရွှေကြည်ဆိုတဲ့ကျုပ်လည်း တခန်းရပ်ပစ်လိုက်မယ်..။
မင်းက ဘာလဲယနေ့ပို့စ်တွေစုမပေးချင်တော့လို့ပြေးမှာလား မရဘူးနော် ဖတ်ရွေးတွေ ဒွတ်ခရောက်ကုန်မယ်..။
ငါ့မောင်ကို ဘူတွေ ဘာပြောကြလို့တုန်း ပြော မမဂျီးကိုယ်တိုင် လုံချည်စွန်တောင်ဆွဲပြီး လိုက်ရန်တွေ့ပေးမယ်..။
ဝေ…မောင်အံဇာ မောင်မင်းထွက်သွားရင် ယနေ့ပိုစ့်ဆိုတာမျိုး..။ နောက် မှတ်သားစရာ ပိုစ့် တင်နည်း တွေ နာတို့က ဘယ်နားက သွားကြည့်ရမလဲ..။ သွားတဲ့အကြောင်းလဲ သိချင်ပ..။….သူများတွေကို အနိုင်နဲ့ မပိုင်းနဲ့နော်…. အံအံမ…။ တားကျေနပ်ဝူး..။ ဒါဗြဲ။
စိတ်ပူတော်မမူကြပါနဲ့ ဒကာကြီးတို့ ဒကာမကြီးတို့…။
တွေ့ဆုံကြုံကွဲ ဆိုတာ ဖြစ်မြဲမဟုတ်လားကွယ်…။
ဒကာကြီးမောင်အံစာ က နောက်တာ ဖြစ်မှာပါ…။
ကျုပ်ကတော့ ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ပရိသတ်ဆိုတော့ ဒီလို တွေးပါတယ်…။
၀ါကျ တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ ဒုတိယ စာလုံးလေးတွေကို စာစီကြည့်လိုက်တော့…
<ကျုပ် တောင်ကြီး အင်းလေး ခရီးထွက်မှာမို့ ခဏပျောက်နေမယ်
တော်သေးတယ်။ ခရီး က ကယ်လို့။
ဒီတော့ ကျုပ် အမည်က က ဒီမှာ ဇာတ်လိုက်။
“ယနေ့ပို့စ်” မှမရှိရင် ဘာမှ လုပ်မရတော့ တဲ့ ဘဝ မို့
ရပ်ရင် ကျုပ် တို့ က မပါပါအောင် ဒရွတ်ဆွဲခေါ် ရမှာ။
အံစာတုံးတို့ ကတော့ အံ့ရော အံ့ရော
မောင်ပေ့အတွက် ဖိုချရေ ထန်းလျက်အရက်လေး ပါဆယ်ယူလာပေးလို့ 
တာရာမင်းဝေရဲ့စာသားလေးပဲ.ရွတ်တော့မယ် ။
သတိရခြင်းကို ငါပိုင်တယ် ။
ကိုသူရ က ..
ဟို ဆားပုလင်းဘလက်ကြီး လုပ်လိုက်တာ
ပေါ်မှတော့ ထူးတော့ပါဘူး …
အဟဲ … အဟီး …
ခဏတာ နှုတ်ဆက်ခဲ့ဘာဒယ်ဂျို့ ….
ကွန်မန့်ပေးသူ အပေါင်းကိုလည်း ကျေးကျေးဘာလို့ …
ကွန်မန့် မပေးဒဲ့ လူဒွေဂိုတော့ ကျေးဇူးတင်ဘူး ..
ချိတ်ချိုးဒယ် .. ဒါဘဲ .. ဟိုဟာကြက် .. ဒီဟာ ငှက် …
ဟွန်.လူးဇိုး…….ကိုယ့်ဟာကို တောင်င်င်င်င်င်င်င်ဂျီး တွားဒါများအေ….. အလန်တကြားချိလိုက်ထာ..
တောင်ကြီးမှာ လျှောင်ကီးနဲ. တွေ.ပါစေတော်….
အံဏှာတုံး ရွာထဲမှ ခဏပျောက်မည့် ကိတ်စ မှာ ၊ သူ့ လေဒီဝါဝါး နှင့်အတူ ဟန်းနီးမူး ထွက်မည် ဖြစ်သည် ဟု ၊ အံဏှာတုံး ကိုယ်တိုင် ၊ ဇွတ်မေးလွန်းသောကြောင့် ၊ ဒဲ့ဖြေသွားပါကြောင်း
နောက်ဆုံးရ သတင်း တောင်မှ တိုတိုတုတ်တုတ် ဆိုဘဲ ..
အိုက်ဒဒင်း .. မှားယွင်းဘာဂျောင်း …
မောင်ပေ ဆိုသူ၏ နဖူးကို တူဖြင့် ထုသင့်ဘာဂျောင်းးး
မောင်အံကလည်း ၀ှက်စာ အရေးတော်။
ဆားပုလင်းကြီး ဖော်ကောင်ဘညွန့် လုပ်ပြီးမှ ဖတ်ခွင့်ရလို့ တော်သေး။
နို့မို့ တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်ကြည့်ပြီး စိတ်မောရအုံးမှာ။
ဒီနေ့မှဗျာ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ ပြင်ပကိုရောက်သွားလို့ အခုည ဆယ်နာရီထိုးမှပဲ
ဆက်သွယ်မှုအေရိယာထဲပြန်ရောက်တော့ဒယ် ခင်ဗျားက နှုတ်ဆက်တဲ့ အထဲမှာ
ကျုပ်နာမည်တောင်မပါ ပါဘူးဗျ။ စတာပါဗျာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားကို ခင်ပါတယ်ဗျ
အခုဟာက ဘယ်လိုကြောင့် နှုတ်ဆက်ရဒယ်ဆိုတာလေးပြောပါ့ဦး။ ၀မ်းနည်းလွန်းလို့
မျက်ရည်တောင် ၀ဲမိပါတယ် ဒဂယ်ပါဗျာ။
ပြောချင်တာက ကျုပ်နောက်ကျသွားတယ် ….
ဘာလို့လဲဆို ခင်ဗျားစာ ၃ပုဒ်လောက် ပြန်ရှာဖတ်ရတယ် … တကယ်က အားလုံး ၅ပုဒ်ဗျ ..။
ကျုပ် ကွန်းမင့်တွေ ဖတ်ပီးပီ .. ။
ကျုပ်တို့ဆြာ လေးဗလတ်က အရင်ဆုံးပြောပြထားပီးပီဘဲ …
ခင်ဗျားရေးထားတာ မသင်္ကာစရာ ၂ပိုဒ်ရှိတယ်
နောက်ပီး ၀ါကျကို အကျိုးအကြောင်းမပြဘဲ ထပ်ဆင့် ခွဲထားတာ ရှိတယ်။
၂၀၁၂ အတွက် ခင်ဗျားကို စာပေအရေးအသားအတွက် ဂုဏ်ပြုပါရစေ ..။
ကြာခဲ့ပီပေါ့ ဒီလိုမျိုး အရေးအသားတွေကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့ကြတာ …..။
မှတ်မှတ်ရရ တစ်ချို့သော စာတတ် ပညာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေများ ခလေးတွေ ထမင်းယူဖို့ လက်ညှိုးထောင်တာတောင် ၀ါဒခွဲခြင်ကြသေး …..
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ ဆြာအန်ယေ ..
မောင်အံဇာ ရွာအပြင်ထွက်လို့ကတော့ တူ……..မတော်ဘူးနော်
သကျိုး ကို မြင်နေတွေနေကျဆိုတော့သံယောဇဉ်တော့
ပဟေဋ္ဌိ ဖွက်တာ ၊
တော်လိုက်တာ ကိုရင် အံစာ ရယ် ။
ကိုရင်အံစာက.. ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်သိထားတာမို့.. တခုခုတော့တခုခုလို့.. ထင်တာ..
ဖြည်ပြသွားတဲ့.. ကိုရင်ဘလက်က.. “အင်မတန်တော်တော့တော်”ပါကြောင်း..
အင်း….. တော်ဆို… တော်တဲ့သူတွေ စုနေကြတဲ့ ရွာသာယာလေး ပဲ မဟုတ်လား …
ကျုပ်တယောက်ကိုဖယ် အားလုံး တော်ကြပါပေတယ် …။
ခဲနဲ့ထုခံချင်နေတာ သူငယ်အံ အလန့်တကြားနဲ့ ခရီးသွားမှာ အေးအေး မသွားဘူး။
အမလေး.. အနံ့တောင်မရဖူးတဲ့ ရွာသူတွေကို
ဖွန်ကြောင်ရတာ ပြိုင်ဖက်တစ်ယောက်လျော့သွားပီ မှတ်ဒါ…